WARBIXIN: 13 Dal Afrikaan Ah Oo Tacadiyada Ugu Badan Loogu Geysto Ciyaartooyda, Dil, Jir Dil Iyo Mushaar La’aan Joogta Ah | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » WARBIXIN: 13 Dal Afrikaan Ah Oo Tacadiyada Ugu Badan Loogu Geysto Ciyaartooyda, Dil, Jir Dil Iyo Mushaar La’aan Joogta Ah
WARBIXIN: 13 Dal Afrikaan Ah Oo Tacadiyada Ugu Badan Loogu Geysto Ciyaartooyda, Dil, Jir Dil Iyo Mushaar La’aan Joogta Ah	Guddiga caalamiga ah ee xirfadle yaasha kubadda cagta ee magaciisa loo soo gaabiyo Fifpro ayaa baaritaan ka sameeyay adduunka oo dhan iyaga oo waraystay 14,000 oo xirfadleyaal kubadeed ah oo kala jooga 54 dal, arrintaas oo noqonaysa midkii ugu baaxad waynd ee abid la sameeyo.
In kabadan 3,000 oo ka mid ah ciyaaryahannada ka qayb qaatay baaritaankaas waxay ka soo jeedaaan 13 dal oo Afrikaan ah kuwaas oo kala ah: DR Congo, Egypt, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Morocco, Namibia, South Africa, Tunisia and Zimbabwe.
Inkastoo dhallinyaro badan oo Afrikaan ah ay ku riyoodaan in ay noqdaan sida Drogba ama Samuel Eto’o hadana macluumaadka uu soo aruuriyay Fifpro wuxuu sawir madaw ka bixinayaa nolosha ciyaaryahanka Afrika ku nool.
Waxyaabaha layaabka leh ee baaritaankan lagu ogaaday waxaa ka mid ah in dhibaatada jidheed ee soogaadha ciyaaryahannada Afrikaanka ah in uu yahay midka ugu daran adduunka oo dhan.
Tacdiyada ay ciyaartoyda Ghana kala kulmaan madaxdooda kooxaha waxay toban jeer ka badan tahay cecelis ahaan heerka caalamiga ah.
Waxay wajahaan noocyo kala duwan oo tacadiyo ah:
In isir ahaan loo cunsuriyeeyo taas oo badanaa ka timaada taageerayaasha ama ciyaaryahannada kale.
In waxyeelo jidheed loogu gaysto gudaha garoonka ama dibaddiisa
In loogu cagajugleeyo sixiixitaanka qandaraasyada
In la takooro isaga oo ciqaab looga dhigayo
Ciyaaryahannadu waxaa kale oo ay ka war bixiyeen midab takoor heer sare ah kaas oo ururka Fifpro ay ukala qaybisay mid ku salaysan isir nacayb, mid diimeed iyo tacaddiyo galmo la xiriira kuwaas oo ay gaystaan, tageerayaasha, ciyaaryahannada kale, shaqaalaha tababarka iyo xataa qolyo kale oo si uun hawshooda ugu lugleh.
Arrintaas waxaa kali ah oo lala simay Scotland oo midab takoorka ka jira intiiisa badan uu salka ku hayo kala qaybsanaanta diinta ee Catholic Celtic iyo Protestant Rangers.
Marka ay timaado mushahaar bixinta ciyaaryahannada Ghana 100% waxay sheegeen in ay qaataan wax ka yar kun doolar bishiiba.
Ciyaaryahannada ugu mushahaar wanaagsan ee bishii qaata in kabadan kun doolar oo Maraykan ah waa kuwa dalka Morocco, inkastoo iyaguna ay yihiin kuwa ay haysato hubaanti la’aanta mustaqbal ee ugu badan.
Horyaalka Masar ayaa loo arkaa midka ugu awoodda badan ee Afrika, labo ka mid ah kooxahooda ayaana ku guulaysay horyaalnimada Afrika tiro aysan ku guulaysanin kooxaha kale oo Afrika ka dhisan.
Xulka Al Ahli ayaa sideed jeer loo caleemo saaray horyaalnimada Afrika.
Iyada oo ay saas tahay haddana Masar ayaa kaallinta shanaad kaga jirta mushahaar bixin xumada 13 kooxood ee la qiimeeyay.
Qaaradda Afrika ayay joogaan ciyaaryahannada kubadda cagta ee ugu badan ee aan haysanin qandaraas qoran, baaritaankanna 40% waxay sheegeen in aysan haysanin nuqul ka mid ah qandaraaskooda.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/warbixin-13-dal-afrikaan-ah-oo-tacadiyada-ugu-badan-loogu-geysto-ciyaartooyda-dil-jir-dil-iyo-mushaar-laaan-joogta-ah/">WARBIXIN: 13 Dal Afrikaan Ah Oo Tacadiyada Ugu Badan Loogu Geysto Ciyaartooyda, Dil, Jir Dil Iyo Mushaar La’aan Joogta Ah</a>